Faritra Menabe : tsenabe hiantsoana ny rehetra (NewsMada) | AEMW
Faritra Menabe : tsenabe hiantsoana ny rehetra (NewsMada)
Hisokatra any Morondava, ny 9 sy 10 septambra 2016 ho avy izao, ny “Tsenabe Renala”, andiany faharoa. Tsenabe ara-toekarena hanentanana ny rehetra hitrandraka ny vokatra ao amin’ny faritra. “Tsy hitondra fampandrosoana ho an’ny faritra mihitsy raha malaza manankarena fotsiny, nefa tsy voatrandraka izany”, hoy ny lehiben’ny faritra, Gilbert Romain. Andraikitry ny rehetra ny mandray anjara araka izay tandrify azy ; antsoina ihany koa ireo mpiara-miombon’antoka sy mpamatsy vola rehetra.
Karazana fotoana famolavolàna izay tetikasa ho an’ny fampandrosoana ihany ny fisian’io tsenabe io, fa aorian’izay vao tena hatomboka ny asa, miankina amin’ny fikarohana ho an’ny lalam-pihariana isanisany. Hojerena akaiky ireo olana mahakasika ny tantsaha any am-potony ary hohamafisina tanteraka ny fandriampahelamana, singa iray lehibe miantoka ny fampandrosoana.
Faritana ny fomba fanaraha-maso ny tetikasa rehetra, toy natao tany Belo amoron’i Tsiribihina taorian’ny “Tsenabe Renala” andiany voalohany, niarahan’ireo mpiara-miombon’antoka maro nanao. Mitohy, hatramin’izao, ny fanatsarana ny voly voanjo mampalaza iny faritra iny. Betsaka rahateo ny tinady, mifaninana amin’izany ny mpandraharaha eto an-toerana sy ny Sinoa. Vokatra azo aroso eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny voanjon’ny faritra Menabe ankehitriny.
Sehatra iray tsy ampy ny fitrandrahana azy any amin’iny faritra iny, ny fizahantany, izay hiantsoana mpandraharaha maro mandritra io fotoana io.
← Brickaville : mandroso ny asa fanarenana ny Sirama (NewsMada)